ဒြပ်စက္ကူနှင့် PP အကြားခြားနားချက်
1、 ရုပ်ရှင်ကားအားလုံး။ ဒြပ်စက္ကူအဖြူသည်။ PP သည်အဖြူရောင်အပြင်အရာ ၀ တ္ထုအပေါ်တွင်လည်းတောက်ပသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဆိုပါဒြပ်စက္ကူ paste လုပ်ပြီးနောက်, ဒါကြောင့်ချွတ်ကိုက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည် paste လုပ်နိုင်ပါတယ်။ PP သည်နောက်ထပ်မသုံးနိုင်တော့ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မျက်နှာပြင်သည်လိမ္မော်ခွံပေါ်လာလိမ့်မည်။ 2、 သောကြောင့် Synthet ...
Roll သို့မဟုတ်စာရွက်တွင် PP / PET / PVC ကိုယ်ပိုင်ကော် Holographic ရုပ်ရှင်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်မျက်နှာကုန်ပစ္စည်း PET / PVC / PP Holographic ကော်ရေအခြေစိုက်စခန်း၊ အရည်ပျော် / ဖယ်ရှားနိုင်သောစာရွက်အရွယ် A4 A5 သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်အရ ၁၀ စင်တီမီတာမှ ၁၀၈ စင်တီမီတာအထိအရှည်၊ အလျား ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ မှ ၁၀၀ မီတာအထိလိုအပ်သည်။ ။
တံဆိပ်များနှင့်စတစ်ကာများစတစ်ကာများနှင့်တံဆိပ်များဘာကွာခြားသလဲ။ စတစ်ကာများနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းများသည်ကော်ကပ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားပြီးအနည်းဆုံးတစ်ဖက်တွင်ရုပ်ပုံသို့မဟုတ်စာသားများရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ သို့သော်နှစ်ခုနှင့်တစ်ခုခြားနားမှုတကယ်ရှိသလား။ လူသား ...
အပြာ၊ အ ၀ ါ၊ အနီရောင်၊ အပြာ၊ ပွင့်လင်းသောအစိမ်းရောင်၊ အပြာ၊ အပြာနှင့်အစိမ်းအစိမ်း။ မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများကိုအဖုံးမထားပါ၊ အထူ ၄၀ ကို၊ ၄၀um၊ ၆၀um၊ ၈၀um၊ ၁၀၀um၊ 150um, 200um နှင့် 250um စသည်ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်များအထည်အလိပ်ရေစိုခံ၊
ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တောက်ပသောအဖြူရောင်၊ အဖြူရောင်၊ တောက်ပသောငွေရောင်၊ Matte silver၊ တောက်ပသောရွှေ၊ မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများအထူ 25um, 45um, 50um, 75um နှင့် 100um စသည်တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်စသည်တို့ကိုမျက်နှာပြင်ကုသမှုအဘယ်သူမျှမအပေါ်ယံပိုင်းသို့မဟုတ်ရေ -based အပေါ်ယံပိုင်းအဘယ်သူမျှမ။ အရက်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး fricti ...
20-12-07 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆံပင်စောင့်ရှောက်မှု၊ တစ်ကိုယ်ရေစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အထည်အလိပ်စောင့်ရှောက်မှုစသည့်အရာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝအတွက်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးပေးနိုင်သောကြောင့်တံဆိပ်များသည်ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုလှပအောင်ပြုလုပ်သည်၊ ကုန်ပစ္စည်းထောက်ခံချက် - (85μm Glossy and White PE / ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတံဆိပ်များမှဝန်ခံခြင်း - Shawei Digital
Coronavirus ရောက်လာတဲ့အခါသင်သိတဲ့ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးပစ္စည်းတွေဟာမျက်နှာဖုံးတွေ၊ အကာအကွယ်အ ၀ တ်အစားတွေ၊ လက်ဆီတွေစတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အစိုးရကတရားဝင်တံဆိပ်ခတ်ထားတာဟာအရေးကြီးတဲ့ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ သင်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်သိလိုသည်？ the ... ငါတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြရအောင် ...
ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့တံဆိပ် - ကျောက်စိမ်း
ဖြုတ်တပ်နိုင်သောတံဆိပ်သည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောကော်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်ဟုလည်းလူသိများသည်၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုနောက်ကျောစတစ်ကာတစ်ခုမှအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ပြီးနောက်ကျောစတစ်ကာတစ်ခုတွင်ကပ်ထားနိုင်သည်။ တံဆိပ်သည်အခြေအနေကောင်းနေပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ removab ...
အရောင်းအ ၀ ယ် - အဖြူရောင်မှုတ်ဆေးရောင်စုံမှုတ်ဆေးအတွဲ - အလင်းရောင်ဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။
မှုန်ရေမွှားအထည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ကွဲပြားသည်။ ၎င်းကိုအထူ၊ အလင်းနှင့်ပစ္စည်းများစသည်တို့ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်အနက်နှင့်အဖြူရောင်အထည်ကိုနောက်ခံမီးအလင်းရောင်အထည် ဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ အနက်ရောင်အ ၀ တ်အစားဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အပေါ်အောက်နှင့်အောက်ပေ ၂ ခုရှိသည့် PVC film ...
အခြေခံသတင်းအချက်အလက်အမည် - ရေစိုခံ Inkjet PP ဖွဲ့စည်းမှု - PP စက္ကူ + ရေစိုခံသောအကာနံရံသုတ်ခြင်းအပြီးသတ်ထုတ်ကုန်၏အထူ - 80um / 100um ထုတ်ကုန်၏အင်္ဂါရပ်များ ၁။ Epson global, India Technova, England Afinia, China Trojanjet, US Quick တံဆိပ်စသည်တို့ ,. ၂ ။
အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ စက္ကူတံဆိပ်၊ ရုပ်ရှင်တံဆိပ်။ ၁။ စက္ကူတံဆိပ်သည်အဓိကအားဖြင့်ရေဆေးခြင်းနှင့်လူသုံးများသောလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ရုပ်ရှင်ပစ္စည်းများအဓိကအားဖြင့်အဆင့်မြင့်နေ့စဉ်ဓာတုထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုကြသည်။ လက်ရှိတွင်လူကြိုက်များသောတစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းများနှင့်အိမ်သုံးအရည်အဝတ်လျှော်ပစ္စည်းများ ...